ပရိသတ်တွေခေါ်နေတဲ့ ဆုန်ဆုန် ဆိုတဲ့ နာမည်ကို သဘောကျနေတဲ့ အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်” – XB Media Myanmar
အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်ကတော့ လတ်တလောမှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Myanmar Idol Season (4)သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ချင်းတိုင်းရင်းသူလေးတစ် ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဆုန်သင်းပါရ် လိုလင်းလက်လာမည့် ကြယ်ပွ င့်လေးလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးမွမ်းခြင်းခံနေရပြီး Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ပထမဆုံး မိန်းကလေး Winnerဆုရှင်လို့လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ထင်ကြေးပေးခြင်းကိုလည်း ခံနေရတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ပါ။
Auditionမှာ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးထွက်ရှိလာကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကိုပါရရှိထားတာပါ။လက်ရှိမှာလည်း အက်စတာ ဒေါသ်ချင်းဆုန်ကို ချစ်ခင်တဲ့ ပရိသတ်တွေက ” We Love Esther Dawt Chin Sung (ဆုန်ဆုန်) ” ဆိုတဲ့ We Love Groupလေးဖွဲ့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမလေးကို သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ “ဆုန်ဆုန်”လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ဆိုကြပြီး ဒီလိုခေါ်ဆိုကြတဲ့ အပေါ် အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်ကတော့
” ‘ဆုန်ဆုန်’ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုချစ်မိလာတယ်။တွယ်တာလာတယ်။ အရင်တုန်း ကတစ် ခါ မှ ”ဆုန်ဆုန်” လို့အခေါ်မခံဖူးဘူး။ဒီနာမည်လေးနဲ့ကျမှတိုင်းရင်းသားပီပီသသ ဖြစ်သွားတယ်။ အားရတယ်။ ကြိုက်တယ်။ တစ်မျိုးလေးနဲ့ကျေနပ်မှုရမိတယ်။ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးကြပါစေ။”လို့ အရမ်းသဘောကျနေတဲ့ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ “ဆုန်ဆုန်”လေးကတော့ အရမ်းတွေသဘောကျနေပြီတဲ့နော်….
Source : Esther Dawt Chin Sung
“ပရိသတ်တွေခေါ်နေတဲ့ ဆုန်ဆုန် ဆိုတဲ့ နာမည်ကို သဘောကျနေတဲ့ အက်စတာဒေါ့သ် ချင်းဆုန်”
အက်စတာဒေါ့သ်ချင်းဆုန်ကတော့ လတ်တလောမှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Myanmar Idol Season (4)သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး တစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဆုန်သင်းပါရ် လိုလင်းလက်လာမည့် ကြယ်ပွင့်လေးလို့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချီးမွမ်းခြင်းခံနေရပြီး Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ ပထမဆုံး မိန်းကလေး Winnerဆုရှင်လို့လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ထင်ကြေးပေးခြင်းကိုလည်း ခံနေရတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝ င်တ ယာက်ပါ။
Auditionမှာ ယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးထှကျရှိလာကတညျးက မွနျမာနိုငျငံရဲ့ နာမညျကွီး အဆိုတောျတှရေဲ့ ဝနျးရံခွငျးကိုပါရရှိထားတာပါ။လကျရှိမှာလညျး အကျစတာဒေါသျ ခငြျး ဆုနျကို ခစြျခငျတဲ့ ပရိသတျတှကေ ” We Love Esther Dawt Chin Sung (ဆုနျဆုနျ) ” ဆိုတဲ့ We Love Groupလေးဖှဲ့ထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ခငြျးမလေးကို သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှေ ကတော့ “ဆုနျဆုနျ”လို့ ခစြျစနိုးနဲ့ခေါျဆိုကွပွီး ဒီလိုခေါျဆိုကွတဲ့ အပေါျ အကျစတာေ ဒါ့ သျခငြျး ဆုနျကတော့
” ‘ဆုန်ဆုန်’ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုချစ်မိလာတယ်။တွယ်တာလာတယ်။ အရင်တုန်း ကတစ်ခါ မှ ”ဆုန်ဆုန်” လို့အခေါ်မခံဖူးဘူး။ဒီနာမည်လေးနဲ့ကျမှတိုင်းရင်းသားပီပီသသ ဖြစ်သွားတယ်။ အားရတယ်။ ကြိုက်တယ်။ တစ်မျိုးလေးနဲ့ကျေနပ်မှုရမိတယ်။ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးကြပါစေ။”လို့ အရမ်းသဘောကျနေတဲ့ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ “ဆုန်ဆုန်”လေးကတော့ အရမ်းတွေသဘောကျနေပြီတဲ့နော်….
မမတွေကြွေသွားစေမယ့် သုတ အောင် ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေး”